Global Voices teny Malagasy » Maty Tany Am-ponja Ilay Lehilahy Niharan’ny Sazy Noho Ny Fanoherana Mpanjaka Tao Thailand · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Mey 2012 6:21 GMT 1	 · Mpanoratra Aim Sinpeng Nandika avylavitra
Sokajy: Thailandy, Fisamborana sy faneriterena, Mediam-bahoaka
Henatra ho an'i Thailand ny fahafatesan'i Ampon, fantatra any an-toerana amin'ny hoe “Akong”.
Akong dia voaheloka hifonja 20 taona noho ny raharaha fanivaivàna mpanjaka izay tsy voaporofo akory natao azy, mifanaraka amin'ny lalàna momba ny Heloka Bevava Atao Amin'ny Alàlan'ny Solosaina any Thailand. Ilay rangahibe efa 60 taona, izay niady ela tamin'ny homamiadana amin'ny vava, dia heverina fa maty vokatr'io aretiny io. Ireo ezaka natao hanafahana azy amin'ny alàlan'ny onitra, noho io aretiny io indrindra, dia nolavina hatrany avokoa. Ny fanentanan'ireo mafàna fo sy avara-pianarana ao Thailand, ary avy any ivelany mba hamotsorana an'i Ampon, raha toa kosa nitambatra ireo fanohanana avy amin'ny vahoaka, dia samy tsy nampiova ny nahazo azy. Ity tranga ity no noraisina ho iray amin'ireo henjana indrindra amin'ny “fanamelohana noho ny faniratsiràna mpanjaka  voarakitra hatrizay”.
Amphon Tangnoppakul, eo ankavanana, nalaina sary fony izy nosamborin'ny polisy Thaia – Sary: AP Photo
Tamin'ny Aogositra 2010 ity tantara hafahafa ity no nanomboka rehefa nosamborina tao an-tranony i Akong ary notànana tsy nisy fiampangàna nandritra ny 2 volana. Ny Janoary 2011 izy vao nampangaina ho nandefa SMS 4 nolazaina fa manivaiva ny fitondra-mpanjaka, ny sekretera manokan'ny praiminisitra Abhisit Vejjajiva tamin'izany fotoana sy mpikambana hafa tao amin'ny kabinetra. Nolavin'i Akong ireny fiampangàna ireny.
Nandritra ny fitsaràna, Ampon nilaza fa tsy hainy akory na ny fomba fandefasana SMS aza ary tsy mahafantatra akory ireo laharan'ny nandefasana izy. Nitomany izy nandritra ity sedra ity ary tsy nitsahatra namerimberina ny fitiavany ny mpanjaka.
Nanambara mazava tsara ny didy ilay mpitsara, Chanatip Mueanpawong  ” Tsy afaka niantso vavolombelona akory hatramin'ny farany ny mpiampanga mba hanamafy fa hoe ity olona miaro tena ity no hany tokana nandefa hafatra tany amin'ny findain'ny mpitory. Tena sarotra ny nandroso porofo mandresy lahatra satria ny voatory, ho nanao izany fihetsika izany, mazava loatra fa hamafa ny nataony mba tsy hahitan'ny hafa azy ireny. Amin'ny toy izany dia ilaina ny mifototra aminà porofo alaina ara-keviny mba ho enti-manondro ny eritreritra nanosika ilay toriana.
Akong dia nohelohina 20 taona an-tranomaizina, 5 taona isaky ny SMS iray nalefa.
Ireo hafatra tao anaty finday dia nolazain'ny manampahefana fa niaty tenim-boto nanivaiva ny mpanjakavavy sy fanaovana tsinontsinona ny voninahitry ny mpanjaka.
Araka ny iLaw , ny polisy dia niainga tamin'ny tahiry momba ny fidirana hampiasa ilay finday tamin'ny alalan'ireo vavolombelon'ny sampan-draharaha mpanome tolotra fiseraserana sy ny polisy mba hanamelohana an'i Akong.
Nilaza ny Biraon'ny Kaomitim-Pirenena Ho an'ny Fanapariahana sy Fifandraisan-davitra fa tsy fahita firy ilay tranga, ary tsara ny mampitandrina ho an'ireo mpampiasa finday rehetra hitandreman-dry zareo fatratra amin'izay zavatra ataony amin'ny findainy.
Fony tany am-ponja, ny Fitsarana Fandravana Didy dia nandà hatrany ny fanafahana amin'ny alàlan'ny fandoavana onitra ho an'i Ampon, amin'ny filazana ny maha-henjana ilay tranga ho tahaka ny fanohintohinana ny filaminana anatin'ny firenena sy angamba koa ny andiam-piaramanidiny
Ny fahafatesan'i “Dadatoa SMS” dia niteraka fanehoan-kevitra matanjaka, sy nisarika manokana ny saina avy amin'ny vondrom-piarahamonina ety anaty Cyber – betsaka no sorena, raha faly kosa ny sasany.
“Iriko ny mba hahitan'ity firenena ity ny rariny sy ny fahalalahana, saingy ny maniry no hany azoko atao. Iriko mba hahita hazavana ireo tsy mahay na inona na inona, saingy ny manonofy no hany azoko atao. Heveriko fa tsy maintsy aho mandefitra amin'izao zava-misy izao. Fa na izany na tsy izany tsy azo ialàna ny fahafatesana” hoy ny nosoratan'i Poltahan Manoke Klang Prapan.
Piangkam Pradabkwan dia nanoratra tononkalo  iray tao amin'ny pejiny Facebook, izay ny tonony farany dia manao hoe : “Maty i Akong. Iza no namono ilay lahy antitra? Ela loatra ny fiavian'ny rariny – heloka bevava izao. Tsy misy vidiny ny ain'olombelona ary mitobaka be. Mifoka sy ahenoana fofom-paty isan'andro ry zareo.”
Ny hafa tsy dia taitra loatra tamin'izay fahafatesan'i Akong. “Miangavy mba omeo haja ilay lahy antitra. Mety efa any amin'ny helo izy izao miaraka amin'ny afobe mipololotra eo am-bavany,” hoy i major181226 namaly ilay lahatsary Youtube  momba an'i Akong. “Mendrika azy ny ho faty. Hisondrotra amin'izay izao ity tanintsika ity. Rehefa tapitra ilay sedra maroloko, afaka hivoatra amin'izay ny firenantsika. Sa tsy miombona amin'izany ianao??” hoy i Purno5 
Resaka tsy rariny sy tsy fikarakarana ireo voafonja no tranga nahazo an'i Akong. Solafaka tsy nahefa ny adidy amin'ny maha-fiarahamonina isika amin'ny fanilihana ny fahasamihantsika ara-politika haka sisiny rehefa miatrika fanitsakitsahana zon'olombelona mivandravandra toy izany. Ka tokony ho menatra isika amin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/17/33322/
 fanamelohana noho ny faniratsiràna mpanjaka: http://asiancorrespondent.com/82131/uncle-sms-akong-jailed-for-lese-majeste-dies-a-chronology/
 Nanambara mazava tsara ny didy ilay mpitsara, Chanatip Mueanpawong : https://globalvoicesonline.org/wp-admin/prachatai.com/sites/default/files/Ampon.pdf
 hoy ny nosoratan'i Poltahan : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002163111312
 lahatsary Youtube: http://youtube.com/watch?v=re25dd_N0c